Tendrontany Avaratra - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Tendron-tany avaratra)
Ny Tendrontany Avaratra dia toerana ara-jeôgrafia any avaratra indrindra eto an-tany, any ampovoan' ny renomasimbe Arktika manana halalina 4 261 m. Misy ranomandry foana eo aminy. Ny tendrontany avaratra dia tsy teboka iray tsy mihetsika, fa somary mivilavila tahaka ny tandrimo, ny tsingerim-potoana fihodinkodinany dia14 volana.
Ny saritanin'ny tendron-tany avaratra
Samihafa amin' ny tendrontany araka anjan' andriamby ny tendrontany ara-jeôgrafia, ny tendrontany araka anjan' andriamby dia ivon-toerana itodihan' ny tondroavaratra.
Ny fizahana ny tendrontany avaratra dia nanomboka tamin' ny 1908 tamin' i Frederick Cook tonga tany tamin' ny 21 Aprily (2008), fa mety nafeniny ny tena lalany. Nilaza ny Kongresan' i Etazonia hoe i Robert Peary ny tonga tany an-tendrontany voalohany tamin' ny 6 Aprily 1909, fa tsy dia manaiky izany fisehon-javatra izany ny mpanao tantara tamin' ny nahitana ny tahaky ny diarin' i Peary: nety diso izy tamin' ny faminavinany. I Roald Amundsen sy i Umberto Nobile no tena fantatra fa nanidina teo ambon' ny tendrontany avaratra tamin' ny fiaramanidina tamin' ny 26 Mey 1926.
Eo anelanelan'ny -43 °C sy 0 °C ny hatsiaka any amin' ny tendrontany avaratra, izay no mampisy ny ranomandry lalandava (eo anelanelan' ny 2 sy 4 m eo ho eo ny hateviny) any amin' ny tendrontany. Ankehitriny, dia mitady hitsonika ny ranomandry amin' ny hafanana mihakatra amin' ny andro fahavaratra, ary mety tsy hisy ranomandry intsony any amin' ny tendrontany amin' ny fahavaratra 2014 satria mihamafàna ny toetr' andro.
↑ True north : Peary, Cook, and the race to the Pole W.W. Norton & Company, New York, 2005
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tendrontany_Avaratra&oldid=998877"
Dernière modification le 11 Desambra 2020, à 13:44
Voaova farany tamin'ny 11 Desambra 2020 amin'ny 13:44 ity pejy ity.